admin January 29, 2022 समाचार Leaveacomment 85 Views
देशभर थप ४ हजार ९०४ जनामा को- रोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । १४ हजार ५६२ जनाको को- रोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट ३ हजार ३१८ तथा एन्टिजेन विधिबाट १ हजार ५८६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
यो सँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेर ८७ हजार ३२९ मा पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६ जनाले ज्या- न पनि गुमाएका छन् । नेपालमा हालसम्म को-भिड–१९ को सङ्क्रमणबाट ११ हजार ७०३ जनाले ज्या-न गुमाइसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार थप २ लाख ७२ हजार ७४८ जनाले को- भिड–१९ विरुद्धको खोप पनि लगाएका छन् । हालसम्म १ करोड ६५ लाख २७ हजार ७४१ जनाले पहिलो मात्रा, १ करोड ४० लाख १५ हजार ३२४ जनाले दोस्रो मात्रा र ३ लाख ३३ हजार ८३५ जनाले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाइसकेका छन् ।
पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार ८ सय २० जना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौंमा १४०४, भक्तपुरमा १११ र ललितपुरमा ३०५ संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ५२ हजार ७६४ सक्रिय संक्रमित छन्। जसमध्ये काठमाडौंमा ३७०३४, ललितपुरमा १०१२५ र भक्तपुरमा ५६०५ सक्रिय संक्रमित छन् ।
Previous बट्टाईको अण्डा खाने गर्नुभएको छ ? यस्तो नसोचेको परिवर्तन आउँदै छ हजुरको शरीरमा ! खाने विधी अवश्य जान्नुहोला
Next विद्यार्थीलाई जापानले बर्षौ देखि प्रवेश प्रतिबन्ध गरेपछि दूतावास अगाडि धर्ना